ललितपुर: गीता केसी ह’त्याका’ण्ड, काकीलाई ह’त्या गर्नुको कारणबारे निर्मलले दिए यस्तो बयान – Rapti Khabar
काठमाडौं, असोज १२, ललितपुरको चुनीखेलकी गीता केसीको ह’त्या अभियोगमा प’क्राउ परेका निर्मल केसीविरुद्ध जिल्ला अदालत ललितपुरमा मु’द्दा द’र्ता भएको छ। यो खबर नेपालखबरमा उजिर कार्कीले लेखेका छन् ।
जिल्ला सरकारी व’किल कार्यालय ललितपुरले सोमबार गीताकै भतिजा निर्मललाई ज’न्म’कै’दको स’जाय माग गर्दै अदालतमा मु’द्दा दर्ता गरेको हो।
उक्त मु’द्दामा मंगलबारबाट अदालतमा ब’यान र पु’र्पक्षको बहस चल्ने छ। पक्राउपछि गरिएको बयानका क्रममा उनले गीताको ह’त्या आफूले गरेको स्वी’कार गरिसकेका छन्। निर्मल र गीताबीच चार वर्षदेखि शा’रीरिक स’म्ब’न्ध रहेको पाइएको छ।
घटना भएकै दिनपनि आफूहरुबीच शा’री’रिक स’म्ब’न्ध भएको निर्मलले बताएका छन्। उनीहरुबीच विगत चार वर्षदेखि यस्तो स’म्ब’न्ध रहेको समेत खुलेको छ।
अ’नुस’न्धा’नका क्रममा निर्मलले प्रहरीलाई दिएको ब’यान यस्तो छः
घ’ट्ना’स्थ’लमा छरिएको अवस्थामा फे’ला परेको भनिएको नागरिकतासहितको ब्याग, जुत्ता, परिचय पत्र, पहेँलो कपडाको सल मृ’तक गीता केसीको हो। घटनास्थल नजिकबाट बरामद गरेको नोकिया कम्पनीको अगाडीको सिसा फुटेको मोवाईल मैले नै प्रहरीलाई देखाइदिएको हो।
घटनाको समयमा मैले प्रयोग गरेको मेरो बा९३प ४६२३ नम्वरको मोटरसाइकल समेत प्रहरीले बरामद गरेको छ।
काकीले विगत २ वर्षदेखि अल्का अस्पतालमा हाउस किपिङ्गको काम गर्न थाल्नु भएको थियो। मैले आफ्नो मोटरसाईकलमा राखेर काकीलाई काममा पुर्याउने र घरमा ल्याउने गर्दै आइरहेको थिएँ।
सोही क्रममा २०७७ भदौ १७ गतेका दिन बिहानै मैले काकीलाई फोन गरेर घुम्न जाऔं भन्दा काकीले सहमति जनाउनु भयो। दिनको अन्दाजी सवा एक बजेतिर काकीलाई मोटरसाइकलमा राखेर म भैंसेपाटीबाट बाटो लागें।
एकान्तकुनास्थित पेट्रोलपम्पमा पुगेर मोटरसाइकलमा पेट्रोल राखेपछि मैले काकीलाई आज लेलेतिर घुम्न जाऔं है भन्दा काकीले हुन्छ भन्नु भयो। त्यसपछि लेलेतिर घुमफिर गरी साँझ घर फर्कंदै थियौं। चापागाउँतर्फ आउने क्रममा लेले भञ्ज्याङ्गमा पुगेपछि काकीसँग शा’री’रिक सम्पर्क राख्ने सोच बनाएँ।
मोटरसाइकल भञ्ज्याङ्गबाट मोडेर जंगलको बीच भागको बाटोमा पुर्‍याएपछि सहमतिमा शा’री’रिक स’म्पर्क गरेँ। शा’रीरिक सम्पर्क राखेपछि कुराकानी हुँदा काकीले भन्नुभयो, ‘मलाई आज घरमा जान मन लागेको छैन।’
मैले किन भनि सोध्दा काकीले भन्नुभयो, ‘मैले घर, बालबच्चा र तपाईंलाई छोड्न सक्दिनँ र मलाई माया गर्ने अरु मानिसहरूलाई पनि छोड्न सक्दिनँ, मर्‍यो भने आनन्द हुन्छ जस्तो लागेर आ’त्मह’त्या गर्न मन लाग्छ।’
काकीको त्यस्तो कुरा सुनेर म छाँगाबाट खसेजस्तै भएँ। मैले काकीलाई आफ्नो श्री’मतीलाई भन्दा बढी माया गर्थेँ, समय दिन्थेँ, हरेक ईच्छा आकांक्षा पुर्याउने गरेको थिएँ।
र, पनि अरु मानिसहरूसँग स’ल्किएको कुरा सुनेर काकीप्रति घृ’णा जाग्यो। आवेगमा यसलाई यही एकान्त जंगलमा सि’ध्याएर फाल्छु भन्ने सोच आयो। र, मैले उभिएर बसेकी काकीको गलामा बेरिएको सललाई पछाडीबाट दुवै हातले स’माती का’कीको घाँ’टीमा कहिबेर जो’डले कसेपछि काकीको प्रा’ण गयो।
त्यसपछि ला’श कसैले देख्छ कि भन्ने ड’रले बाटो छेउको भीरबाट धकेलेर जंगलको झाडीतर्फ पल्टाएँ। जंगलको भिरालो ठाउँबाट बेगले गुल्टिँदै ला’श तल बाटोबाट नदेखिने ठाउँमा पुग्यो।
मोटरसाईकलको ह्याडलमा झु’ण्ड्या’एको काकीको खैरो रंगको लेडिज व्यागमा रहेको काकीको मोवाइल झिकेर व्याग जंगलको झाडीमा फालें। मोवाईल आफ्नो गोजीमा राखेर ह’तार ह’तार मोटरसाईकल चलाएर बाटो लागें।
केहि अगाडी आईपुग्दा काकीको मोवाईलमा फोन आयो। तर मैले फोन उठाइनँ। मोवाईलको कारण फ’सिने ड’रले मैले गोजीमा राखेको मोवाईल समेत त्यही जं’गल’तर्फ फ्याँकें।
त्यसपछि सरासर आफ्नो घरमा आएर बसें। त्यही दिन बेलुकासम्म पनि काकी घरमा नआएको भनि काकीको सानी छोरीले मलाई फोन गरेपछि काका शिवशरण केसीले मलाई शं’का गरे कि भनेर काकालाई भेट्न गएँ।
काकालाई भनेँ, ‘दिउँसो काकीलाई अल्का अस्पताल नजिक पुर्‍याएर फर्केको थिएँ, यतिखेरसम्म त आईपुग्नु पर्ने।’
फोन गरेर बुझ्छु भनेर अल्का अस्पतालमा काम गर्ने काकीका साथीहरूलाई समेत फोन गरी सो’धी खोजी गरेँ। प्रहरीले खो’जत’लासको क्र’ममा काकी गीता केसी हराएको र १७ गते दिउँसो काकीलाई मैले मोटरसाईकलमा लिएर हिंडेको कुरा थाहा पाएछ।
प्रहरीले मलाई भैंसेपाटी चोकबाट लिएर गएपछि मलाई अब फ’सियो भन्ने लाग्यो। प्रहरीले सोधपु’छ गर्दा मैले काकीलाई मा’रे’को हुँ भनि वा’स्तविक कुरा बताएँ। –नेपालखबरबाट साभार
भदौ २०, ललितपुर । भैंसेपाटी बस्दै आएकी ३९ वर्षीया गीता केसीको ह’त्या अरोपमा भतिजा निर्मल केसीलाई प्रहरीले प’क्राउ गरेको छ । निर्मल शनिबार बिहान भैंसेपाटीस्थित घरबाट प’क्राउ परेका हुन् ।
प्रहरीको प्रारम्भिक अनु’सन्धानमा गीताको घाँ’टी थि’चेर ह’त्या गरिएको हो । केसीको परिवारले उनी ह’राएको भन्दै तीन दिनअघि महानगरीय प्रहरी परिसर, ललितपुरमा उ’जुरी दिएको थियो ।
केसीको श’व शुक्रबार साँझ ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–१० मुलडोलस्थित सामुदायिक वनमा ह’त्या गरेको अवस्थामा सडकबाट दुई सय मिटरभित्र लेलेको जंगलमा फेला परेको थियो ।
ह’त्या आरोपी केसीविरुद्ध ज्यान सम्बन्धी क’सुरमा म्या’द थप गरेर विस्तृत अ’नुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
तीन वर्षदेखि अफेयरमा
निर्मल र गीता विगत ३ वर्षदेखि अफेयरमा रहेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । ह’त्या आ’रोपी निर्मलले गीतासँग अफेयरमा रहेको स्वी’कारेको प्रहरीले जनाएको छ ।
श’व फे’ला परेलगत्तै प्रहरीले अनु’सन्धान थालेको थियो । अनु’सन्धान सुई निर्मलतिर सोझिएपछि प्रहरीले भैंसेपाटीस्थित घरबाट निर्मललाई प’क्राउ गरेको ललितपुरका प्रहरी प्रमुख एसएसपी टेक प्रसाद राईले जानकारी दिए ।
मृ’तकको श्रीमान घरमा नभएको बेला निर्मल जाने आउने समेत गरेको अनु’सन्धानमा संलग्न एक प्रहरीले बताए । ‘सहयोग गर्ने बहानामा मृ’तक केसी र निर्मलबीच नजिकको सम्बन्ध रहेको खुलेको छ,’ ती अधिकृतले रातोपाटीसँग भने ।
अल्का अस्पतालको कर्मचारी
मृ’तक गीता केसी पुल्चोकस्थित अल्का अस्पतालको कर्मचारी रहेको खुलेको छ । अस्पतालमा ‘हाउस किपिङ’ को रुपमा कार्यरत थिइन् मृ’तक केसी ।
निर्मलले नै मृ’तक केसीलाई अस्पताल लगिदिने र ल्याइदिने गर्थे । अनु’सन्धानमा संलग्न प्रहरीका अनुसार सोही दिनपछि मृ’तक केसीले श्रीमानलाई ढाँटेर अस्पताल जानुपर्ने भयो भन्दै घरबाट निस्केकी थिइन् ।
निर्मलले अस्पताल नगई घुम्न जाउँ भनेपछि उनीहरु लेलेको जंगल गएको प्रहरी अनु’सन्धानबाट खुलेको छ । जंगल पुगेपछि केही समय उनीहरु एकान्तमा गएर बसेको खुलेको छ ।
‘त्यहिँ उनीहरुबीच झ’गडा हुन्छ,’ अ’नुस’न्धानमा खटिएका प्रहरी भन्छन्, ‘सामान्य झ’गडाले ह’त्याको रुप लिएको देखिन्छ ।’ यद्यपी झ’गडाको कारण आर्थिक लेनदेन हुनसक्ने आशंका गरिएको छ ।
घाँ’टी थि’चेर गी’ताको ह’त्या गरिएको हुनसक्ने प्रहरीको अनुमान छ । मृ’तक केसीको शरीरमा केही चोटपटक समेत देखिएको छैन । यद्यपी पोष्टमार्टम रिपोर्टपछि मात्रै ह’त्याको कारण भन्न सकिने एसएसपी राई बताउँछन् ।
आर्थिक लेनदेन हुनसक्ने
मृ’तक केसीको श्रीमानले र’क्सी खाएर सधैं गी’तासँग झ’गडा गर्ने गरेको प्रहरीले बताएका छन् । सो कुरा निर्मलले राम्रोसँग नियालिरहेका हुन्थे ।
श्रीमानबाट अप’हेलित भएपछि गीतालाई निर्मलले हरेक कुरामा सहयोग गर्दै आएको प्रहरी अनु’सन्धानबाट खुलेको छ । मृ’तक केसीले निर्मललाई पैसा पनि राख्न दिएकी थिइन् ।
‘राख्न दिएको पैसा मागेपछि ह’त्या गरेको हुनसक्छ,’ अनु’सन्धा’नमा खटिएका प्रहरी भन्छन्, ‘आर्थिक मामिलाको विषयलाई लिएर नै केसीको ह’त्या भएको हो । आरो’पीले समेत घ’टना स्वी’कारेका छन् ।’
गीता केसी ह’त्याका’ण्ड, के भएको थियो ?
काठमाडाैंभदौ २१, शुक्रवार ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका– १० मुलडोलस्थित लेलेको सामुदायिक वनमा ह’त्या गरेको अवस्थामा ललितपुर भैँसेपाटी बस्दै आएकी ३९ वर्षीया गीता केसीको श’व फेला परेको थियो ।
अल्का अस्पतालमा हाउसकिपिङको काम गर्ने गीता केसीको श’व सडकबाट केही मिटर तल गत शुक्रवार बेलुका फेला परेको हो ।
आफ्नै भतिजसँगको विवाहेतर सम्बन्धले उनलाई मृ’त्युको मुखमा पुर्‍याएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ ।
ह’त्याको अरोपमा भतिज निर्मल केसीलाई प्रहरीले शनिवार आफ्नै निवासबाट प’क्राउ गरेको छ ।
विगत ३/४ वर्षदेखि विवाहेतर सम्बन्ध रहेको अनुसन्धानमा खुलेको महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) टेकप्रसाद राईले बताए ।
‘विगत ३/४ वर्षदेखि गीता र भतिज निर्मलको अफेयर रहेको अनुसन्धानमा खुलेको छ,’ एसएसपी राईले लोकान्तरसँग भने ।
प्रहरी अनुसन्धानको क्रममा निर्मलले गीताको घाँ’टी थि’चेर ‘हत्या गरेको अनुसन्धानमा खुलेको छ । ह’त्या गरेर फरार रहेका निर्मललाई प्रहरीले शनिवार भैँसेपाटीको आफ्नै निवासबाट प’क्राउ गरको थियो ।
गीताको परिवारले उनी हराएको भन्दै ३ दिनअगाडि महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरमा उजुरी दिएका थिए ।
ह’त्या आ’रोपी निर्मलवि’रुद्ध ज्या’नस’म्बन्धी क’सुरमा जिल्ला अदालत ललितपुरबाट म्या’द थप गरी अनु’सन्धान भइरहेको प्रमुख एसएसपी राईले बताए ।
विवाहेतर सम्बन्धले निम्त्याएको दु’र्घटना
गीता केसीका २ वटी छोरी छन् । एउटा छोरी अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया गएकी छन् । गीताका श्रीमान् भने रोजगारी गर्दैनथे, बेला–बेलामा श्रीमान्सँग उनको झ’गडा पनि हुने गर्दथ्यो ।
त्यही झ’गडाका कारण आफ्नै भतिजसँग विवाहेतर सम्बन्ध राख्न पुगेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) सन्तोष तामाङले बताए ।
‘२ वटा छोरी भएकी गीताको श्रीमान्सँगको सम्बन्ध ठीकै भएको खुलेको छ । बेला–बेलामा श्रीमान्ले मदिरा सेवन गरेर झगडा गर्ने गरेको अनुसन्धानमा खुलेको छ,’ डीएसपी तामाङले लोकान्तरसँग भने ।
आ’रोपी भतिज निर्मलले मृ’तक गीतालाई कार्यस्थल अल्का अस्पताल पुर्‍याउने र ल्याउने गर्दथे ।
ह’त्या भएको दिन निर्मलले घुम्न जाऊँ भनेपछि गीताले आफ्ना श्रीमान्लाई अस्पतालमा काम गर्न जान्छु भन्दै लेलेको जंगलमा घुम्न गएको आ’रोपीले स्वी’कारेको अनु’सन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकारीले बताएका छन् ।
उनीहरूले जंगलको एकान्तमा केही समय बिताएको र सामान्य झ’गडाले ह’त्याको रूप लिएको हुनसक्ने ती अधिकारीले लोकान्तरलाई बताए ।
‘उनीहरूबीच झ’गडा भएपछि गीताको ह’त्या भएको देखिन्छ र त्यही झगडाले ह’त्याको रूप लिएको देखिन्छ,’ ती अधिकारीले भने ।
यद्यपि पोष्ट’मार्टम रिपोर्ट भने आइसकेको छैन । आइतवार साँझसम्म पो’ष्टमार्टम रिपोर्ट आएपछि ह’त्या कसरी भएको भन्ने कुरा खुल्ने प्रमुख एसएसपी राईले बताए । लोकान्तरबाट
प्रचण्डलाई ‘रअ’को धम्कि ! प्रधानमन्त्री बन्न यस्ता सर्त राख्यो
आफ्ना ढोके चौकीदारहरुलाई हप्कीदप्की, मोलमोलाई र आदेश जारी गरेर ‘रअ’को हाकिम फर्केको छ। केपी ओली, पुष्पकमल वा शेरबहादुरमध्ये कसले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने प्रशन तेर्स्याउँदै उसले सबैसंग सर्तहरु राखेको छ। सुरक्षा, विदेश मामिला, पानी, नागरिकता र चीनको बिआरआईमा संलग्नताका बारेमा ‘रअ’ले मूख्य चासो देखाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। पुष्पकमललाई इण्डियाकाे स्वार्थलाई उपेक्षा गरे थप समस्या […]